Ramadaan kuwii hore ka duwan - Lørenskog kommune
Ramadaan kuwii hore ka duwan
Jimcaha ayuu ramadaankii u billaabanayaa kumannaan muslimiin ah oo reer Norway ah. Soonku wuxuu sanadkaan ku eg yahay sabtida 23-ka maajo. Lørenskog Iqra Caadil iyo Cali Saalax Saalim ayaa diyaar u ah 30 maalmood oo aan la oggolayn cunto iyo cabbid midna inta u dhexaysa qorrax-soo-baxa ilaa iyo qorrax-dhaca. Cudurka korona ee faafi og ayaa is-beddello ku keenayaa ramadaanka sanadkaan, laakiin labaduba waxay noo xaqiijiyeen in is-beddello aan badnayn kaddib in ay wax walba si wanaagsan u dhici doonaan.
Iqra Caadil iyo Cali Saalax Saalim oo ramadaanka kala hadlaya marwada ah duqa magaalada. Lørenskog kommune – Soonkii sidiisii ayaan u soomaynaa. Is-beddelka ugu weyn ee uu cudurka faafi og ee korona keenayo ayaa ah in ay masaajiddii xiran yihiin, markaas salaadihii oo dhan waa in guriga lagu tukadaa ee aan masaajidka lagu tukan, ayay tiri Iqra Caadil. Gurigooda waxaa ku soomaya ayada iyo saygeeda. ­
Cali Saalax Saalim iyo xaaskiisuna sidii caadiga ahayd ayay u soomi doonaan.
– Midda uu sanadkaan uga duwanaan doono kuwii hore ayaa ah afurka. Afurku waa cuntada la cuno ramadaanka marka ay qorraxdu dhacdo, taas oo aalaaba ay qoyska ballaaran iyo saaxiibbadu isku meel ku afuraan. Ramadaankaan inteenna isla deggan oo keliya ayaa wada afuri doonna, ee saaxiibbadeen lama afuri doonno sidii caadada ahayd. Waa muhiim in aysan dad badan meel isugu imaannin in kasta oo ramadaan lagu jiro. Waa arrin si kale ah, laakiin waa muhiim oo waxaa gacan laga geysanayaa in uusan fayraska korona faafin, ayuu yiri Cali.
Duqa magaalada, marwo Ragnhild Bergheim waxaa ka cajabiyay sida ay muslimiinta Lørenskog ula qabsadeen ramadaanka iyaga oo ka hor tagaya faafidda fayraska korona.
– Waan ogahay in uu ramadaanku maamuus muhiim ah u leeyahay muslimiinta Lørenskog, waxaana aad iiga cajabiyay sida masaajidda loo xiray oo laysugu boorrinayo in guryaha lagu tukado, islamarkaana afurkii loogu koobay intii isku guri deggan ayay tiri marwada ah duqa magaalada.
Gabagaba ahaantii waxay marwada ah duqa magaalada ka codsatay Cali iyo Iqra in ay soo jeediyaan talo ku aaddan sidii looga hor tagi lahaa faafidda cudurka.
­ Cali Saalax Saalim oo ka qosliyay marwada ah duqa magaalada iyo Iqra Caadil Lørenskog kommune – Midkiin ba kan kale ha ka taxaddaro oo guryaha jooga. Ka fogaada isu imaatinka, laakiin waxaa wanaagsan in aad Skype ku xiriirtaan/kulantaan. Waa hab wanaagsan oo lagu kulmo islamarkaana aan cudur lagu kala qaadayn, ayay tiri Iqra.
– Taas ayaan ku raacsanahay, ayuu yiri Cali. Waxaa kale oo iyana weli muhiim ah in ay nadaafadda gacmuhu wanaagsan tahay, maxaa yeelay taas ayaa waxtar badan leh. Dadkeenna muslimiinta ah shan jeer ayaan haddaba weyseysannaa marka salaadda la tukanayo. Haddii aan ku darno in aan maalintii shan jeer oo kale gacmaha dhaqanno, markaas waxaan si wanaagsan uga qaybqaadanaynaa in uusan fayrasku faafin, ayuu hadalkii ku daray.
Kuwaasina talooyin fiican bay la ahaayeen marwada ah duqa magaalada.
- Waxaan idinkaga mahadcelinayaa in aad si wanaagsan ugu hoggaansanteen dhammaan talooyinkii looga hor tagayay faafidda cudurka oo aad ka qaybqaadateen in aan hadda gacanta ku dhignay faafiddii fayraska. Waxaan sidoo kale jeclahay in aan dhammaantiin idin iraahdo ramadaan wanaagsan iyo soon bilaa cudur ah, ayay ku soo gabagabaysay duqa magaalada, marwo Ragnhild Bergheim.
Ku saabsan ramadaanka iyo fayraska korona
Xeerarka ay dawladdu ka soo saartay ka hor tagga faafidda cudurrada ee fayraska korona ee loo baahan yahay in loo hoggaansamo, xataa ramadaanka:
Marar badan gacmaha ku dhaq biyo iyo saabbuun.
Masaafo laba mitir ah u jirso dadka kale
Lama oggola in lala kulmo dad ka badan shan qof.
Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay
Waxaa lagu talinayaa in salaadaha oo dhan guriga lagu tukado ee aan masaajidka lagu tukan.
Dad ka badan shan qof oo aan isku guri degganayn ma wada afuri karaan. Waxaad samayn kartaan in ay qoysaska, saaxiibbada iyo qaraabadu fiidiyow isku xirtaan.
Golaha islaamka Norway ayaa filimaan warbixin ah ku diyaariyay luuqado kala duwan kuwaas oo ku saabsan sidii aad ramadaanka si wanaagsan ugu gudan lahayd adigoon naftaada iyo midda dadka kale midna u soo jiidayn khatar ay cudur ku qaadaan. Waxay sidoo kale diyaariyeen qoraal lala soo degi karo, kaas oo isla talooyinkaas xambaarsan.
Sist endret30.09.2020 11.25